रंगीन कपाल : रोगको घर कन्ट्याक्ट डरम्याटिटिस छाला चिलाउने तथा यसमा जलन हुने एक रोग हो, जो छालासँग बाहिरी तत्त्वहरूको सम्पर्कका कारण हुने गर्छ । कपाल रंग्याउन प्रयोग गरिने प्याराफिनाइलनेडिएमिन (एएम) भन्ने तत्त्व यस रोगको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो । यसले स्वास्थ्यमा पार्ने नराम्रो असरलाई ध्यानमा राखेर जर्मनी, फ्रान्स, स्विडेनलगायतका देशमा धेरै पहिले नै यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि बि्रटेन र अमेरिकामा कपाल रंग्याउन अझै पनि यसको प्रयोग गरिन्छ । हेयर डाई गर्दा टाउको, निधार र कानको सम्पर्कमा एएम् आउँछ र छालामा नराम्रो असर पुर्‍याउँछ । 'भद्राइको छोरो, जुरेलीको नाति, जसो गरे नि पैसैमाथि' भनेझैं यो अहिले पनि बि्रटेनलगायत धेरै देशमा प्रचलनमा रहनुका पछाडि पैसाकै हात छ । शिरमा रङ कारखाना नै बोकेर हिँड्न खोज्ने हाम्रा टिनएजर (अल्लारे) भाइबहिनीहरूले विभिन्न वनस्पतिबाट बनाइने प्राकृतिक रङलाई माया गर्न थाले कति जाती हुन्थ्यो !
मन्जन, साबुन, स्याम्पुमा हुने घातक रसायनसोडियम लोराइल सल्फेट (SLS) मन्जन, साबुन, स्याम्पु आदिमा प्रयोग हुने एक रसायन हो, जसले सफाइ तथा फिँज निकाल्ने प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउँछ । विभिन्न अनुसन्धानबाट यसले छालाको बाहिरी पत्रलाई हानि पुर्‍याउने र छालाको पत्र छेडेर पाँचदेखि ६ मिलिमिटरसम्म भित्र प्रवेश गर्न सक्ने तथ्य पत्ता लागेको छ । दाँत र मुखको प्रभावकारी सफाइका लागि प्रायः मन्जनमा SLS को प्रयोग हुन्छ, जसले मुखभित्रका पातला झिल्लीलाई नोक्सान गर्छ, जो मुखमा हुने अल्सरको यौटा कारण हो ।
नङपालिसमा पनि हुन्छ ज्यानमारा तत्त्वर्फमलडिहाइड नेलपालिस, साबुन तथा अन्य शृंगारका प्रसाधनमा पाइने हानिकारक तत्त्व हो, जसले छाला तथा आँखामा हानि पुर्‍याउने मात्रै होइन कि घाँटीमा क्यान्सर गराउने कारकसमेत बन्न सक्छ । यो तत्त्वयुक्त सामग्री प्रयोग नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । जानीजानी रोग किन बिसाउनु ? टाल्कम पाउडर : खतरनाक धुलो आइस्याडो, बच्चाका लागि प्रयोग गरिने पाउडरलगायत विभिन्न सौन्दर्य सामग्रीमा प्रयोग गरिने टाल्कम पाउडर टाल्क खनिजबाट बनेको हुन्छ । चम्किलो र छालामा टाँसिने गुण भएको टाल्कलाई बि्रटेनको नेसनल टोक्सिकोलोजी प्रोग्रामका वैज्ञानिकहरूले मुसामा सुँघाएर परीक्षण गर्दा मुसामा फोक्सोको क्यान्सरलगायत फोक्सोसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिएका थिए । गुप्तांगवरिपरि टाल्कम पाउडर प्रयोग गर्ने महिलामा गर्भाशयसम्बन्धी क्यान्सर पनि हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनले बताएका छन् । सौन्दर्य सामग्रीमा प्रयोग गरिने यी विभिन्न हानिकारक तत्त्वहरूले क्यान्सर सुरु गर्ने र त्यसको विकास गर्ने अस्ट्रोजिन बनाउन सक्छन् ।२६ स्वस्थ पुरुषमाथि गरिएको पाराबेनयुक्त शृंगार क्रिमसम्बन्धी एक डेनिस अध्ययनमा यो क्रिम लगाएको एक घन्टाभित्र उनीहरूको रगतमा पाराबेन देखिएको थियो । महिलाहरूले काखीको गन्ध हटाउन प्रयोग गर्ने पाराबानयुक्त एन्टिपस्र्पाइरेन्टका कारण उनीहरूमा स्तनको क्यान्सरसम्म हुन सक्छ । ड्यासिङ, गोर्जिएस, ब्युटिफुल, अर्थात् राम्री बन्ने होडबाजी नै चलेको छ महिलाहरूमा, विशेषगरी सहरिया महिलामा । सौन्दर्य तथा शृंगार प्रसाधनहरू प्रयोग गर्न उनीहरू यति धेरै अभ्यस्त भइसकेका छन् कि यस्तो लाग्छ, उनीहरूको सक्कली अनुहार एक दिन पूर्णरूपमा मेटिनेछ । त्यसो त पुरुषहरू पनि यस मामिलामा कम्ती स्मार्ट छैनन् अचेल । हो, सुन्दर हुन खोज्नुपर्छ, सुन्दर हुन पाउनुपर्छ । तर, अनुहार र शरीरलाई हानि पुर्‍याउने बजारिया सौन्दर्य सामग्रीका सट्टा प्राकृतिक तत्त्वयुक्त सामग्री प्रयोग गरे कसो होला ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट सदा लुटिनुपर्छ भन्ने छ र ? अझ सकिन्छ भने शृंगार सामग्री प्रयोगै नगरे कसो होला ? भनिन्छ नि, सादापन सबभन्दा बेजोड सुन्दरता हो । के फूलले कहिल्यै लिपिस्टिक लाउँछ ?
-एजेन्सीको सहयोगमा विक्रम घिमिरे साबार नया पत्रिका